काठमाडौँ। उपत्यकामा माघ पहिलो सातादेखि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालनमा आउने भएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमण कम हुँदै गएको तथा सरकारले समेत चालू शैक्षिक सत्रलाई सदुपयोग गर्ने तयारी गरेअनुसार माघ पहिलो सातादेखि सबै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्यायले नगरपालिकाका विद्यालय आइतबारबाटै सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि सहज होस् भनेर माध्यमिक विद्यालयलाई २५ हजार, कक्षा आठसम्म सञ्चालन भएका विद्यालयलाई १५ हजार र कक्षा पाँचसम्म सञ्चालन भएका विद्यालयलाई १० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा हट्न अझै नसकेको अवस्थामा सावधानीपूर्वक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विद्यार्थी–शिक्षक सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सामाजिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन अगाडि बढाउनुपर्ने र यसमा हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने उनले बताए । विद्यालयको शौचालयबाट सङ्क्रमण सर्ने सबैभन्दा बढी जोखिम भएकाले यसमा सबै चनाखो हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डे बताउँछन्। गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले खबर लेखेका छन् ।